Home » blog » 10 Fitness Atụmatụ maka Ndị Amalite
Atụmatụ Atụmatụ maka Ndị Amalite
Na-eche na ịmalite usoro mgbatị na-emekarị? Oge mbụ aga ụlọ mgbatị? Jiri nyocha 10 a na-enye ahụike maka ndị mbido iji hụ na ị ruru ihe mgbaru ọsọ gị.
1. Mee Ka Ọrụ Gị Bara Uru
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ọtụtụ n'ime ọzụzụ gị, i kwesịrị iburu n'uche na gburugburu 80% nke nsonaazụ ndị ị nwetara site na mgbatị gị sitere na 20% nke mgbatị gị.
Nke ahụ pụtara na n'ime oge awa, naanị minit 12 nke mgbatị ahụ ga-atụnye ụtụ n'ọtụtụ nsonaazụ gị. Ị ga-achọ ime ka minit ole gụọ. Jiri mmepụta ihe na-arụ ọrụ karịa otu ìgwè ahụ ike n'otu oge iji jiri oge gị mee ihe.
2. Na-echeta mgbe niile Iri Ahụ Ike
Enwere ike ịmecha ihe mgbaru ọsọ ọ bụla nke na-eri nri dị mma. Ọ bụrụ na ị na-aga mgbatị ahụ ka ị nwee ike ịga n'ụlọ ma rie cheeseburger abụọ na onye 2-onye na-eje ozi na fries French, ị gaghị eme ahụ gị niile. Mgbe ị gara ịzụ ahịa ahịa, zụta nri nri ike kama nri nri.
Ị ga-ahụ ya na ị na-eri nri na njedebe, na-eburu n'uche na ọ bụrụ na ị na-ere ọkụ karịa calorie, ị ga-eri ntakịrị ihe iji jide n'aka na ị nwere ume zuru oke ruo ụbọchị ọzọ. Kwado ihe oriri na-edozi gị ma zere nri nri.
3. Gbanwee ihe oriri gị
I kwesiri ijide n'aka na ị na-eri ihe kwesịrị ekwesị na iri nri. Iri nri n'ụzọ kwesịrị ekwesị gụnyere iri nri na oge kwesịrị ekwesị. Ezigbo nri ụtụtụ bụ ihe jọgburu onwe ya na ị gaghị eri oge n'abalị. Iri nri n'abali ma ọ bụ mgbe ị na-agwụ ike na-eduga n'iwe calorie na-enweghị isi. Gwa onye nkụzi onwe gị banyere ihe ga-abara gị uru ka i wee nwee ike ime ihe mgbaru ọsọ gị.
4. Mee Atụmatụ Ịrụ Ọrụ Gị
Iji jide n'aka na ị maara nanị mgbe ị na-aga ịzụ ọzụzụ na mgbe ị nwere ike ichere oge oge mgbake, ị ghaghị ịzụlite atụmatụ. Cheta itinye oge ezumike ma chekwaa oge ole ị nwere.
Cheta na ị ga-anọ na oge gị dị ka o kwere mee ka ị ghara ịbanye n'omume ahụ. Ịga mgbatị ahụ na-abụkarị àgwà ọjọọ. Ị gaghị enwe ike iru ihe mgbaru ọsọ gị ma ọ bụrụ na ị banye n'omume ị na-efu ihe mgbatị gị.
5. Mee 100% Ntinye aka iji mee ka obi dị gị mma
Ị ga-echeta na mgbanwe ahụ gị chọrọ nkwụsị zuru ezu n'aka gị. Ị gaghị enwe ike ịpụ otu ụbọchị ma ọ bụ ugboro abụọ, n'ihi na ọ dị gị ka ọ bụ na ị kwesịrị ịga otu ụbọchị. Mee atụmatụ mgbe ụbọchị izu ike gị ga-adị ma rapara na nke ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ga-eme njem, gaa na mgbatị ahụ, ma jide n'aka na ị ga-ewe otu awa site n'ụbọchị ọ bụla iji rụọ ọrụ. Nọgide na-eri nri ahụike.
6. Ekwela Ka Echiche Ziri Ezi Mee Ka Gbanyụọ Gị
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị nke na-agbalị ịkwụsị ibu na ịzụlite obere ọnụ ọgụgụ na obere ọnụ ọgụgụ, ọ dị mfe ileba anya n'ahụ nwanyi na-ahụ maka ya na mberede.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ nwanyị ka ha ghara ịba ụba; ọ chọrọ otu atụmatụ na mgbalị. Ịgaghị emehie ma ọ bụrụ na ị rapara na mmemme nke onye nhazi onwe gị nyere gị.
7. Na-agbakwunye isi ihe
Ị ga-echeta na ị na-amalite na ntụrụndụ. Iji zere mmerụ ahụ na iji zere itinye aka na ọzụzụ gị, ị kwesịrị ijide n'aka na ị maara onwe gị na mmemme ndị dị mkpa.
Malite na ntaneti ụfọdụ wee gbasaa usoro mmemme gị ka ị na-enwekwu obi ike nakwa ka ahụike gị na-ebili.
8. Kwadebe Maka Nhazi Gị Ọhụrụ
Jide n'aka na ị na-etinye onwe gị n'ọrụ mgbatị ma nwee usoro siri ike nke otu ị ga-achọ ka mgbatị gị gaa. Ị ghaghị ịnweta ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ, ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe 6-pack abdominals, na-achọ iji nweta ụfọdụ ngosipụta muscle n'ime ọnwa 6 ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ 20 pound, jide n'aka na oge ị debere onwe gị kwere omume. Ọ nweghị onye na-enye ọzụzụ onwe ya ga - enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị maghị ihe mgbaru ọsọ gị.
9. Cheta ime Cardio
Ịchọrọ inwe 6-mkpọ abdominals, nnukwu biceps, na ụkwụ dị ike? I nweghị ike inweta ihe ndị ahụ site na ibuli ihe dị arọ. I kwesiri icheta ime cardio. Enwere igwe dị iche iche dị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụ ike. Ọtụtụ gyms nwere ihe ndị e ji egwuri egwu, ellipticals, igwe ejiji mmega ahụ, na ígwè ịkwọ ụgbọala.
Ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-ereba abụba site na ịmegharị cardio ugboro ugboro na n'ikpeazụ ngosipụta muscle ga-amalite igosi.
10. Ejila egwu na mgbatị ahụ
I kwesiri icheta na onye obula n'eme egwuregwu a bu otu onodu, ma obughi onye obula bu onye anumanu nke 20. Onye ọ bụla nọ n'ebe ahụ iji nweta ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ na onye ọ bụla ga-amalite ebe.
Echegbula onwe gi banyere ndi mmadu ka ha na-eleba anya na ihe mgbaru ọsọ gi ma mee mgbatị gi. Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị na ị ga-arụ ọrụ, gị na onye enyi gị na-arụ ọrụ ma ọ bụ soro ndị ọzọ na-emega ahụ.
Enwere mgbakwunye ndị ọzọ? Ekwu okwu n'okpuru
March 10, 2016 Akwụsị blog Enweghị asịsa